I-China Quality And Wholesale HDMI 3RCA Wall Plate Manufacturer - AmaConnexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ikhebula Wall Plate > I-HDMI Wall Plate > I-HDMI 3RCA Wall Plate
Ama-Connexions ngumkhiqizi ohola phambili wePlastiki Wall Plates onolwazi olunzulu ngaphezu kweminyaka eyi-17. Le I-I-I-I-I-I-HDMI + RCA Wall Plate izolisusa ngokuphelele iqoqo lezintambo futhi izifihle ngemuva kodonga futhi ilungele ukufakwa kwe-HDTV nokufakwa kodonga netiyetha lasekhaya. Amapuleti ethu odonga epulasitiki abethunyelwa e-US nase-Europe ngamasheya amakhulu emakethe. Besilokhu sizinikela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nokuhlinzekwa kwamakhasimende okuhle kakhulu. Yonke imikhiqizo yenziwa ngaphansi kohlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO9001 futhi i-100% ihlolwe ngaphambi kokuthunyelwa. Ama-connexions azoba ngumenzi wakho obambisene naye wesikhathi eside eChina.
I-I-I-I-I-I-HDMI + RCA Wall Plate
1.Ukwethulwa Komkhiqizo weI-I-I-I-I-I-HDMI + RCA Wall Plate
Ipuleti lodonga le-HDMI + RCA - Dlula kuzici ze-High-Speed ​​HDMI: ezifana ne-HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI Ethernet Channel (HEC), 48-bit color depth, 32 channel audio, Dolby True HD 7.1 audio and bandwidth up kuye ku-18 Gbps.
· In-Wall Routing - Susa iqoqo lezintambo uzifihle ngemuva kodonga; Faka izintambo ngemuva kwe-flat panel TV yakho noma amanye amadivayisi womsindo / wevidiyo. Ilungele ukufakwa kwe-HDTV nodonga nendawo yaseshashalazini yasekhaya
· I-Coupler Ephephile - Inembobo yabesifazane epuletini lodonga ngaphambili nangemuva, ixhuma kalula kwikhebula le-HDMI / RCA odongeni.
Iyahambisana ne-HDMI nazo zonke izintambo ezijwayelekile ze-RCA AV audio. Kulula ukuyifaka, vele ukhwele ngezikulufo nezintambo zokuxhuma ngaphambili kwepuleti
2.UmkhiqizoIpharamitha (Ukucaciswa) kwe- I-I-I-I-I-I-HDMI + RCA Wall Plate
I-HDMI + RCA
I-HDMI ne-RCA Port
3.UmkhiqizoIsici Nokusetshenziswa kweI-I-I-I-I-I-HDMI + RCA Wall Plate
Amapuleti asodongeni ajwayelekile angango-4.5 x 2.7-intshi angabekwa ngebakaki lamandla aphansi elingu-1
4.UmkhiqizoDetails of the I-I-I-I-I-I-HDMI + RCA Wall Plate
5.UmkhiqizoQualification of the I-I-I-I-I-I-HDMI + RCA Wall Plate
6.Deliver, Shipping Futhi Ukukhonza weI-I-I-I-I-I-HDMI + RCA Wall Plate
1.Ingabe le mikhiqizo ikhwalithi iqinisekisiwe?
Amathegi ashisayo: I-HDMI 3RCA Wall Plate, China, Quality, Wholesale, Umkhiqizi